Akanyatsofungwa uye nokukurumidza pashure-okutengesa basa rinopa rutsigiro uye zvinovimbisa kuti makomborero enyu.
◇ Tumira wevanamakanika kuita chokugadza debugging zvokushandisa vatorwa vanoshandisa pamwe muripo. Countries kana kumatunhu pamwe kusagadzikana mamiriro ezvinhu enyika kana kutandadza yehondo haana kuiswawo pakati hurongwa hwedu. .
◇ Dzidzisai vanozvishandisa kurayira midziyo uye kuvatungamirira kuti njodzi kugadzirwa.
◇ Tsanangura tichiita kwerunyararo midziyo nokungwarira uye kubvisa zvakafanana zvikanganiso.
◇ Tiri basa zvose kugadziriswa kuti zvinokonzerwa unhu matambudziko edu mukati rimwe gore garandi. Zvishongedzo Foreign kazhinji yakapiwa dhl mu orde kugovera basa dzimwe vatengi nokukurumidza.
◇ wokumwe vatengi vane mibvunzo iri pashure-okutengesa basa zvinogona zvakananga kutumira neindaneti yedu akasarudzwa mailbox. Tichakurukura mibvunzo yako mumaawa 12 uye kugadzirisa matambudziko akasiyana-siyana kuti vatengi nenguva.
◇ Nokuti vamwe mumaruwa vane mavhiza zvakaoma kuwana, vatengi kunogonawo kutumira wevanamakanika vavo vekwedu kugamuchira vakasununguka nhungamiro uye kurovedza.
◇ Gamuchira mazano kuti uvandudze Arayirwa vatengi nenzira nomwoyo wose. Maererano rokuchinja pamusika, anopa zvinhu uye mabasa kuzosangana vanozvishandisa 'zvinodiwa nokusika netsika kwavari.
◇ The vatengi vane zvigadzirwa kunge passsed ayo garandi musi vanekodzero kunakidzwa pashure-rokutengesa yedu pabasa upenyu.
Kana muine Kukosha
Tapota taura nesu munguva
After-okutengesa basa HOTLINE: + 86-595-22356770 kana pashure-okutengesa basa E-mail kuti dzimwe vatengi: aftersales@qunfeng.com kana aftersale01@qunfeng.com
Tichafara achiedza kugadzirisa matambudziko ako. Kubudirira kwako kuchaita kubwinya itsva kwatiri!
Ndinokutendai yako pamwe nemwoyo wose!